Phimosis, ယောက်ျား၏လိင်တံတွင်အဖြစ်များသောရောဂါ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Villamandos | | ကျန်းမာခြင်း
La ကျောက်ကပ် es လိင်တံတွင်လူတစ် ဦး ၌ဖြစ်ပွားနိုင်သောအတွေ့ရအများဆုံးရောဂါများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်များသောအားဖြင့်၎င်းရောဂါသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော်လည်း ၉၅% သောငယ်သောအရွယ်တွင်ဤရောဂါမှအများအားဖြင့်ခံစားရလေ့ရှိသော်လည်း၊ များစွာသောလူတို့ယုံကြည်သည်များရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်အဖြေတစ်ခုရှိသည်။ ကုသမှုသည်နာကျင်မှုနှင့်ငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အချိန်နှင့်အမျှကျော်လွှားခြင်းခံရသည်။
သင်ဤပြproblemနာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်၊ ၎င်းတွင်ရှိသောရောဂါလက္ခဏာများ၊ ပြcauseနာများနှင့်ကုသရန်အချက်အလက်များ၊ ခဲတံနှင့်စက္ကူများကိုထုတ်ယူလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ပြောမည့်အရာများကိုရေးချရန်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်နှင့်ဤဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးရှင်းပြပါ။
1 Phimosis ဆိုတာဘာလဲ။
2 အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျား၏လိင်တံတွင် phimosis ပေါ်လာသနည်း။
3 ဤရွေ့ကား phimosis ၏အဓိကရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်
4 phimosis အမျိုးအစားများ
4.1 ဇီဝကမ္မ phimosis
4.2 ရောဂါဗေဒ phimosis
5 phimosis ၏ဒီဂရီ
7 phimosis ၏ဖြစ်နိုင်သောပြcomplနာများ
8 phimosis ကျော်လွှား၏မျှော်လင့်ချက်များ
သင် phimosis ခံစားနေရကြောင်းနှင့်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်သင်မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကိုမည်သို့ခွဲခြားသိနိုင်မည်ကိုမပြောမီ၊ phimosis သည်ရှင်းလင်းစွာနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်ကိုသင်သိရမည်။
နည်းပညာပိုင်းစကားပြော ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်တံ၏အစွန်အဖျားအပိုင်းကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အရေပြားတွင်မမှန်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ယောက်ျား၏လိင်အင်္ဂါအဆုံးတွင်ရှိသောဤအရေပြားသည်အလွန်ကျဉ်းမြောင်း။ ၊ glans များတစ်ခါတစ်ရံလုံးဝနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုထုတ်ဖော်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ဤဖြစ်စဉ်သည်လိင်တံကိုစိုက်ထူပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသောအခြေအနေတွင်ဖြစ်စေဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ph Phimosis ရှိခြင်းသို့မဟုတ်မရှိခြင်းသည်လိင်တံ၏အရွယ်အစားကိုမထိခိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာလူတချို့ကိုရှာနေတဲ့လူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့လိင်တံတိုးမြှင့်ဖို့အကြံဥာဏ် လုံခြုံစွာ, ငါတို့သည်သင်တို့အကြံပေး ဤနေရာမှ Penis Master စာအုပ်ကိုကူးယူပါ
အသုံးအများဆုံးသောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများတစ်ခုမှာသင့်တွင် phimosis ရှိသည်ဟုယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤပြtwoနာနှစ်ခုအနက်မှသံသယဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရောဂါကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သင့်လျော်သောကုသမှုပြုလုပ်ရန်အထူးကုဆရာဝန်ထံသွားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျား၏လိင်တံတွင် phimosis ပေါ်လာသနည်း။
၎င်းသည်အလွန်ထူးဆန်းနေလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းမွေးကင်းစအားလုံး၊ ဇီဝကမ္မ phimosis အများဆုံးကိစ္စများတွင်မည်သည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသို့မဟုတ်ကုသမှုမပါဘဲဖြေရှင်း။ အုပ်စုငယ်တစ်စုသည်ပြproblemsနာများသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာမပါဘဲ၎င်းကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်ကုသမှုလိုအပ်လိမ့်မည်။
နည်းပညာပိုင်းအရ phimosis သည်အထက်တွင်ရှင်းပြထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် အဆိုပါအသားကို overlying အရေပြားအတွက်မူမမှန်။ ကံမကောင်းစွာ phimosis ၏အသွင်အပြင်များအတွက်တိကျတဲ့ရှင်းပြချက်မရှိ။
ဤရွေ့ကား phimosis ၏အဓိကရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်
ရောဂါအများစုတွင် Phimosis သည်လူနာအများစုတွင်အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများကိုဖော်ပြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်တံ၏ glans တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝမပြထားဘူး။ ၎င်းကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည့်အခါနာကျင်မှုများသည်များသောအားဖြင့်ပြင်းထန်လေ့ရှိသည်
ဆီးသွားတဲ့အခါနာမယ် ဆီးစီးဆင်းမှုသည်ကောင်းမွန်ပြီးအများအားဖြင့်လမ်းလွဲသွားလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဆီးသွားတဲ့အခါမှာသားအိမ်ကရောင်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤဖြစ်နိုင်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ
တစ်ခါတစ်ရံပြင်းထန်သောနာကျင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည့် glans နှင့်သားရေအသားလွှာမကြာခဏရောင်ရမ်းခြင်း
အဖြူရောင်အကြွင်းအကျန်မကြာခဏ glans အပေါ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် ထိုအသားတင်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ချို့ယွင်းချက်ရှိသောတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုလိုအပ်သောအရေးပါမှုကိုပေးပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာအခြားအရာများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီး Phimosis ကြောင့်မဟုတ်ပါ
သင့်တွင်အထက်ဖော်ပြပါရောဂါလက္ခဏာများများစွာရှိပါကအထူးကုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး အားထိုနယ်မြေကိုစစ်ဆေးပြီးသင်၏ပြproblemsနာများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ရန်အမြန်ဆုံးသွားလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏ပြproblemနာကိုဘေးဖယ်ထားလျှင်ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အရာရာတိုင်းပိုမိုရှုပ်ထွေးလာနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါး၏အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရောဂါကူးစက်မှုအမျိုးအစားအကြောင်းကိုဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်သည် ဒါဟာကလေးမွေးဖွားမှာကလေးများအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့ရက်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှမွေးကင်းစ၏အရေခွံသည် elasticity ဖြစ်လာပြီးမည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲပြန်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်အထိကျယ်လာလိမ့်မည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာပြtheနာဆက်ဖြစ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာမဟုတ်သောအခြားရောဂါလက္ခဏာအကြောင်းပြောလိမ့်မည်။
ဤအမျိုးအစားသည်အလွန်ရှားပါးသည် တစ်သျှူးအသစ်များဖြစ်ပေါ်လာသည့်ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းသို့မဟုတ်အနာများကြောင့်အသက်အရွယ်မရွေးလူတို့တွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည် အနာရောဂါပျောက်ကင်းပြီးနောက်လုံးဝပုံမှန်လမ်းအတွက် glans ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ဤပြproblemနာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးရန်နှင့်ကုသရန်ဆရာဝန်ထံသွားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
နောက်တဖန်လူတစ် ဦး phimosis ရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သူကတစ်မျိုးသို့မဟုတ်အခြားဖြစ်နိုင်သည်သကဲ့သို့, ဒါကြောင့်လည်းတ ဦး တည်းဒီဂရီအထိနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဒီဂရီကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည့်အဝ glans ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်အတွက် V ကိုမှ, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် glans မည်သည့်လမ်းအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါ.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကွဲပြားခြားနားသောရှိပြီးသား phimosis ၏ဖော်ပြချက်၊
အဆင့် ၁ - တိကျမှု၊ အသားစကိုလုံးဝပြန်လည်ရုပ်သိမ်း။ မရပါ၊ မည်သည့်အမှု၌မျှဂလင်းများမမြင်နိုင်ပါ
အဆင့် II: punctate, အသားတင်အနိမ့်ဆုံးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားနိုင်သည်, ဆီး meatus မြင်နိုင်ပါသည်
၃ တန်း - အသားတင်ကို glans အလယ်သို့ပြန်ဆွဲနိုင်သည်
အဆင့် IV: အသားတင် glans ၏ ဦး ရစ်သရဖူအထက်တွင်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ပါတယ်
အဆင့် V: phimotic လက်စွပ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်မှလွဲ။ ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရသောရောဂါ၏အမျိုးအစားနှင့်အတိုင်းအတာပေါ် မူတည်၍ ကုသမှုသည်တစ်မျိုးသို့မဟုတ်တစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြေအနေအားလုံးတွင်ဆရာဝန်မှညွှန်းရမည်။ မိမိကိုယ်ကို phimosis အမျိုးအစားနှင့်ဒီဂရီကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကုသခြင်းသည်အနတ္တဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်နာကျင်စေနိုင်သည်။
corticosteroid ကုသမှု။ ဤကုသမှုအမျိုးအစားကို ၃ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများအတွက်ညွှန်ပြသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အရေပြားလိမ်းဆေးများဖြစ်ပြီးသားအိမ်၏အရေပြားကိုပိုမို elasticity ပေးခြင်းဖြင့်သားအိမ်၏အရေပြားကိုတဖြည်းဖြည်းနှင့် glan များမှခွဲထုတ်နိုင်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်ဤကုသမှုသည်အောင်မြင်ပါသည်၊ သို့သော်ရည်မှန်းချက်မရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ရောဂါရှာဖွေကုသရန်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးထံသို့ပြန်လည်သွားပြီးကုသမှုအသစ်တစ်ခုကိုချမှတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ခွဲစိတ်ကုသမှု။ ဒါဟာမေ့ဆေးနှင့်အတူလူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်ကျင့်သုံးဒါခေါ်အရေဖျားလှီးသည်။ ၎င်းသည် glans များအားလုံးဝထိတွေ့ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသောအသားလွှာအစိတ်အပိုင်းကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းပါဝင်သည်။ အဘယ်သူမျှမပြnoနာများမပေါ်ပေါက်သင့်ပါတယ်, မပေါ်ပေါက်လျှင်, ဒီဟာအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့လက်တွေ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Phimosis သည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်အချို့သောရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤအခြေအနေများသည်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်လေးနက်မှုရှိနိုင်သည်။
ဤတွင် phimosis မှပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်အဖြစ်များဆုံးပြcomplနာများဖြစ်သည်;
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆုံးနှင့်အလေးနက်ဆုံးရှုပ်ထွေးမှုများမှာ paraphimosis ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရေခွံ၏အောက်ခြေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး၎င်း၏ပုံမှန်အနေအထားသို့ပြန်သွားနိုင်ခြင်းမရှိသောအခါ glans ၏ရောင်ရမ်းခြင်းပါဝင်သည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေ penile ကင်ဆာခံစားရတယ် တိုးမြှင့်လာသည်
အဆိုပါ glans အပြည့်အဝရှာဖွေတွေ့ရှိမရနိုင်အဖြစ်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်းအခါဖြစ်နိုင်သောအဆင်မပြေ
Balanitis ဖြစ်တယ် သင့်လျော်သောတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့် glans နှင့် foreskin ၏ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နီခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသည်
phimosis မှဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးမှုများအနည်းငယ်ရှိသည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အလွန်များများစားစားမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုကျော်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Phimosis ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီရောဂါဟာယောက်ျားတွေမှာအဖြစ်များပြီးလူအများစုမှာတော့ဒီရောဂါဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲကျော်လွှားနိုင်ပါပြီတစ်ခါတစ်ရံ၌၎င်းသည်အချို့သောနာကျင်မှုများနှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများထက်အချို့ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လိုအပ်သည်။ နှောင်းပိုင်းတွင်တွေ့ရှိပါကပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေများသို့ ဦး တည်သွားနိုင်သော်လည်းများသောအားဖြင့်တော့လုံးဝပုံမှန်ဘဝကိုအလျင်အမြန်ပို့ဆောင်နိုင်သည်။
ရှုပ်ထွေးမှုများစွာမရှိဘဲကုသမှုကိုမျှော်လင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်သည်သင်၏ကလေးအတွက်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်၌ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်သည်ထိုဒေသ၏ရှာဖွေရေးအတွက်အထူးကုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ထံသွားသောရောဂါပိုးကူးစက်မှု၏အသုံးအများဆုံးလက္ခဏာများရှိသည်။ နောက်ကျလွန်းခြင်းမရှိဘဲဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်သည်။ အများအားဖြင့်၊ ကွန်ယက်ကွန်ယက်ပေါ်ရှိရာနှင့်ချီ။ ရှိသည့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသောအခါအရာဝတ္ထုများရှုပ်ထွေးသည်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့် phimosis ကိုရင်ဆိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » ကျန်းမာခြင်း » Phimosis၊ ယောက်ျား၏လိင်တံ၏အဖြစ်များသောရောဂါ
Diego mamani ancasi ဟုသူကပြောသည်
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ငါကဒုတိယတန်းကို ၃ မိနစ်လောက်အကြာမှာတွေ့ရတဲ့ဂလင်းနောက်ကွယ်မှာအသားမကျဘူးလို့ထင်ရပါတယ်။ ငါ glans ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ဖော်လိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်မပြန်ဘူး၊ ဆီးသွားတဲ့အခါငါနာကျင်မှုအနည်းငယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ပြproblemsနာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံစိုက်ထူသောအခါကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အထိနာကျင်မှုသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မနာကျင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုလိုအပ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ ငါ၏အဂုဏ်သတင်းက glans နောက်မှမရပါဘူးတူညီတဲ့နေဆဲ glans အနည်းငယ်သိသာရရှိသွားတဲ့။ ငါစာနယ်ဇင်းလိုအပ်ပါတယ်?
diego mamani ancasi သို့ပြန်သွားရန်
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ခbတွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောလက်စွပ်ရှိပြီးအင်အားလည်းရှိပါသည်။ အရေဖျားလှီးခြင်းသည်လေးနှစ်ပင်ဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည် Rodrigo ပါ။ ကျွန်တော်အသက် ၁၇ နှစ်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါအသားကိုဂလင်းတစ်ချောင်းကိုပြန်ဆွဲထုတ်နိုင်ပေမဲ့အားစိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ကျွန်တော့်မှာတိုတောင်းသောအူကြောင်ကြောင်တစ်ခုနှင့်အတ္တလက်စွပ်ကိုသိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ ဒါကြောင့်ပြtheနာ frenulum ၌တည်ရှိ၏ဖြစ်နိုင်မည်နည်း ငါအသားအရေ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုလျှက်ထားသည့် frenulum ၏အစွန်အဖျားရှိအရေပြားတစ်ချောင်းကိုကျွန်ုပ်ထိုးထားသည့်အရာရှိပြီးထိုတွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အသားပိုကျယ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သင့်ကိုအများကြီးကူညီပေးပါ
Andreas Herrera ဟုသူကပြောသည်
ငါ glans တစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြရန်သားအိမ်ကိုပုံမှန်နည်းလမ်းဖြင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံစိုက်ထူသောအခါ၊ glans ၏သရဖူပေါ်တွင်အရေပြားလက်စွပ်တစ်လုံးပေါ်လာပြီး၎င်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖုံးအုပ်ထားသည်။ ငါထပ်မံလျှော့ချလိုလျှင်ငါနာကျင်မှုအချို့ခံစားရသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၌အရေပြားပိုလျှံသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရောဂါပိုးမွှားများရှိပါသလား။ အရေဖျားလှီးခြင်းလိုအပ်ပါသလား။ ၎င်းကို corticosteroid ဆီမွှေးဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသလား။
Andreas Herrera အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်၊ ကျွန်ုပ်၏အသားအရေပြတ်တောက်မှုသည်အလွန်နာကျင်ပြီးရောင်ရမ်းလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ထံသွားသင့်သောရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Wilter zambrano ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၅၂ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံတိုင်းအချိန်ကာလတိုတောင်းသော frenulum တစ်ခုရှိသည်၊ erogenization ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်အပြစ်ပြုခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုကြီးမားသောခေါင်းပေါ်တွင် quason ကဲ့သို့ဖြစ်စေပြီး ၀ တ်ဆင်ရန်နာကျင်ခြင်း
Wilter zambrano အားပြန်ပြောပါ
ရီကာဒို Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်ပိုမိုပြင်းထန်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ကြာမြင့်စွာသတိပြုမိခဲ့ဖူးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အရေးပါမှုကိုမပေးခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှဖယ်ရှား။ မရနိုင်ပါ။ လိင်တံနီခြင်းကျွန်ုပ်၌လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ကွန်ဒုံးမပါပဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမပြုနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကသွေးထွက်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုတောင်ဖလော်ရီဒါရှိအထူးကုဆရာဝန်ကိုကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါရန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Ricardo Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
မေးခွန်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည် Cordoba မှဖြစ်ပြီး၊ ထိုပြproblemနာနှင့်အတူကျွန်ုပ်လမ်းလျှောက်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်နာကျင်ပြီး ဖြစ်၍ အနာပျောက်စေသောရောဂါကိုကုသရန်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိရှိရသေးပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်သည်မှားသောအစာစားပြီးနောက်လိင်တံနံရံကိုတင်သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၅၃ နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ဖြစ်လျက်ရှိသည့်အခါအရေပြားပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အရေပြားပေါ်တွင်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်ပုံမှန်ဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိပါ၊ သို့သော်အရေပြားကို ပြန်၍ မဆွဲယူနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တံခါးပိတ်ကဲ့သို့ ငါလမ်းကိုမပေးပါဘူးကြောင်းလက်စွပ်ငါဒီအရာကဘာလဲ ??? တင်ထားရန်မုန့်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိပါသလား
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်သည် ၁၅ နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် V တန်းတွင်ရှိနေပါသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ပြန်လည်၍ ပြန်လည်ရရှိနိုင်လျှင်၎င်းသည် (စိုက်ထူခြင်းမရှိဘဲအေးဆေးတည်ငြိမ်သော) အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသော်လည်းအလွန်စိတ်ပူမိပါသည်။ နောက်ဆုံးငါလုပ်နိုင်တယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဘာလုပ်ရမှန်းပြောနိုင်တယ် !!!
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သားရေကဘာကြောင့်တင်းကျပ်တာလဲ၊ နံရံတွေကဘာကြောင့်ထိခိုက်နေတာလဲ၊ သင်တို့ထိလိုက်တဲ့အခါအရေပြားကိုခြစ်ရာဒါမှမဟုတ်အပူပေးနေသလိုပဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည် Jorge ပါ။ ကျွန်တော့်အမှုကနံပါတ် ၂ ပါ၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလိင်တံထဲဝင်တဲ့အခါမနာပါဘူး။ ငါ glans ကိုတို့ပြီးတို့ထိတယ်၊ ငါ့ကိုခြစ်သလိုလို။ နာကျင်မှုဝေဒနာမခံစားရဘဲ glans များမဖုံးအုပ်ဘဲပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ နေကောင်းလားကျွန်တော့်နာမည်အန်တိုနီ၊ ၂၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်မှာဒီရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာအတိအကျမသိဘူး။ အချိန်ယူပြီးနောက်ကျလွန်းတယ်လို့မထင်ဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်အသားဆေး၏လေးပုံတစ်ပုံကိုတွေ့နိုင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါငါနာကျင်မှုခံစားရလျှင်၎င်းသည်ငါဆီးသွားသောအရိုးအပေါက်တစ်ခုမျှသာရှိသောပိတ်ထားသောအစက်နှင့်တူသည်။ သင်ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးနိုင်မလား ။ ငါကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
Marino SANCHE CUESTA CORREO ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း၊ လိင်ဆက်ဆံသောအခါသူတို့သည်ငါ့ကို prepusio ပတ်ပတ်လည်တွင်အနည်းငယ်သာ ragitas လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ငါ့ကိုကုသပေးသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်ကုသသည့်နေရာတွင်အဖြူရောင်ဖြစ်လာပြီး glans ကိုပြရန်ခက်ခဲသည်။
MARINO SANCHE CUESTA CORREO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ယောက်ျား၌ဤပြaboutနာရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်ပြtheနာဖြစ်စေသည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအရင်ကတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး၊ တစ်နှစ်ခွဲကြာပြီးနောက်မှာကျွန်မတို့သီးသန့်တည်ရှိခွင့်မရနိုင်ပါ။
DámarisMartínez morales ကိုပြန်ပြောပါ
Jorge Aké Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်း၊ ငါဂျော့ဂျ်၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၅၉ နှစ်ရှိပြီ၊ ငါ glans ထုတ်ယူဖို့အရေပြားသို့မဟုတ်အသားကိုပြန်လည်ဆွဲထုတ်လို့မရဘူး၊ ဆီးသွားတဲ့အခါအနည်းငယ်လောင်ကျွမ်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတာကငါသဘောပေါက်လိုက်တာကအဲဒါ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်ရက်နှင့်အထူးဆန်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် glans များကိုဆေးကြောရန်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လျှင်……။ မျှော်လင့်ပြီးသူတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြနိုင်သည်။ မင်္ဂလာပါနှင့်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်………………
Jorge Aké Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
Adrian Vera ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ခဏတာကျွန်ုပ်၌ဤပြandနာရှိနေပြီးကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အလွန်နာကျင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့် ၄ တွင်ပါ ၀ င်ပြီးမည်သည့်ဆီမွှေးသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆေးကိုအသုံးပြုရမည်ကိုသိလိုပါသည်။
Adrián Vera အားပြန်ပြောပါ
ငါ vasquez ကြောက်တယ် ဟုသူကပြောသည်
Temo vasquez သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် jhoss ပါ၊ ကျွန်ုပ်ရည်းစား၏လိင်တံကိုဖုံးအုပ်ထားပြီးသူဆင်းမရနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်ပါသလား။
ဟယ်လို၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်ကကွန်ဒုံးမရှိဘဲငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ တကယ်တော့ငါကကွန်ဒုံးမသုံးပဲပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့မှာရှိနေတဲ့ပြmyနာကကျွန်တော့်ရဲ့အသင်းသားရဲ့ ဦး ခေါင်းကိုဖယ်ထုတ်ဖို့အသားတင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမည်သည့်ပြwithoutနာမှမရှိဘဲဆက်ဆံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အရေခွံသည်၎င်း၏နေရာသို့ပြန်မသွားတော့ဘဲနှစ်ရက်လွန်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို ပြန်၍ မရနိုင်ပါ၊ ငါနေ့တစ်လျှောက်လုံးစိုက်ထူအများအပြားစတင်စတင်ပြtheနာကငါစိုက်ထူရှိသည်အခါတိုင်းနာကျင်နှင့်လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းပတ်ပတ်လည်ကအနည်းငယ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အနီကြည့်, အမှန်တရားငါအလွန်ကြောက်တယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ငါသွားချင်ပါတယ် ပြdoctorနာတစ်ခုကတော့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကငါကငါ့တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာရှိနေပြီးဆရာ ၀ န်ဆီလာလည်ပတ်ဖို့လေးပတ်လောက်အထံတော်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမှန်တရားကအရမ်းမသက်မသာပါပဲ။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုအောက်မေ့ကြ
ငါ glans ထုတ်ယူဖို့အသားအရေသို့မဟုတ်အသားတင်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာမရသောပြandနာရှိသည်နှင့်ဆီးသွားသည့်အခါသူကအနည်းငယ်လောင်ကျွမ်းပေမယ့်ထူးဆန်းတဲ့အရာငါလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်ရက်ထိုသို့သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ထူးဆန်းဆုံးအရာငါလုပ်နိုင်လျှင်မပြုမီသောကွောငျ့ဖွစျသညျ က glans ဆေးကြောဖို့ ...... မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဤကိစ်စတှငျအကြှနျုပျကိုလမ်းပြနိုင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါနှင့်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်………………
သူတို့ကကျွန်တော့်နှလုံးကိုခွဲစိတ်ကုသပြီးဆီးကိုပြွန်တွေသွင်းပေးတယ်။ သူတို့ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်။ urologist က citrofloxacin 500mg လို့ခေါ်တဲ့ပantibိဇီဝဆေးကိုပေးတယ်။ ငါအများကြီးယူပြီးရောဂါကိုဆီးကနေတဆင့်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ငါရောဂါကူးစက်နေတုန်းပဲ။ အဆိုးဆုံးကတော့အရေပြားသည်ကျွန်ုပ်၏ glans များ၌ကပ်ထားခြင်းနှင့် glans နှင့်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုများကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသောအခါအရေပြားကိုပြန်ဆွဲထုတ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်အရေပြားကိုနာကျင်စေပြီးမကြာခဏကျွန်ုပ်သွေးထွက်နေသည့်အခါကျွန်ုပ်ကို drool ဖြစ်စေသည်။ အတော်လေး ardently ငါငါ့ကိုဖြည်းဖြည်းချွတ်ယူကူညီနိုင်ဖို့မုန့်ရှိလျှင်သိရန်, ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
PHIMOSIS သည်ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပါ !!!!!!!
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ အချစ်ကအချစ်တိုင်းမှာလိင်ဆက်ဆံမှုအရငါဘရိတ်နားမှာအရေခွံကိုမွှေနှောက်စေပြီးမျက်ရည်ယိုယွင်းသလို၊ အိုင်တီအလွယ်တကူနာကျင်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် PHIMOSIS အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်ကုသမှုရှိပါကကျွန်ုပ်မသိပါ
ဟယ်လိုအချစ်တိုင်းငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုအားလုံးနီးပါးငါဘရိတ်အနီးရှိအရေခွံမှအငွေ့ပျံပြီးမျက်ရည်ယိုယွင်းသလို၊ အချိန်ကာလတော်တော်များများကသွေးထွက်လာသည်။ အိုင်တီအလွယ်တကူနာကျင်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤဆေးသည်မည်သည့်ရောဂါရှိပါကသို့မဟုတ်၎င်းသည်ကုသမှုရှိပါကကျွန်ုပ်မသိပါ။ 04247004823
Justin clayn ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ရဲ့ p *** နဲ့မင်းဟာ urethra အပေါက် (p *** ရဲ့ hairline) ကိုရှာတွေ့တယ်။ အဆိုပါ glans လုံးဝရှာဖွေတွေ့ရှိသည်အထိမဆင်းပါဘူး
Justin Clayn သို့ပြန်သွားပါ
Carlos Lopez Jimenez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ငါသွေးကြောရောဂါရှိသော်လည်း၊ လိင်တံကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အရေပြားနှင့်လိင်ဆက်ဆံသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မီးလောင်ခြင်းနှင့်သွေးထွက်ခြင်းနှင့်ရေချိုးခန်းသို့သွားသောအခါလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ?
carlos lopez jimenez အားပြန်ကြားပါ
Juan RAMOS ဟုသူကပြောသည်
ငါ PHIMOSIS OPERATIVE လုပ်တော့မည်ဟုဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအဖြစ်အပျက်သည်ကျွန်ုပ်၏အဖြစ်အပျက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
JUAN RAMOS သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၅ နှစ်ဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်တစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်နှင့်သုက်လွှတ်ခြင်းမရှိပဲမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်၊ မကြာသေးမီကအစည်းအဝေးတစ်ခုပြီးတိုင်း glans များသည်အရွယ်အစားသိသိသာသာတိုးလာပြီးငါ့ကိုနဖူးနှင့်ဖုံးအုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၎င်း၏ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်ရောက်သွားသော်လည်း၎င်းသည်မဖြစ်မချင်းငါ masturbate မလုပ်နိုင်ပါ။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဂျင်းဘောင်းဘီအက်စစ် - ချေးသည်အေးသည်
ဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီ ၂၀၁၅/၂၀၁၆: Cape and ponchos အကြားကြည့်ပါ